सुगमले नचाए, परियारलाई पञ्चेबाजाले स्वागत गरिँदै
मनोरञ्जन शिवकुमार काशी
लोकप्रिय गायक सुगम पोखरेलसँग तेस्रो मनहरी महोत्सवमा उपस्थित दर्शकहरु दिनभर झुमेका छन् । पोखरेलले गाएका हरेक गीतमा आवाज दिँदै नाच्दै यहाँ उपस्थित युवा पुस्ताले साथ दिए । मनहरी ४ बेलुवास्थित मनहरी खोला किनारमा माघ १६ गतेदेखि सुरु भएको तेस्रो मनहरी महोत्सवको नवौँ दिनको प्रस्तुतिमा युवा तथा किशोर किशोरीका मानसपटलमा बसेका गायक पोखरेल आएका हुन् । उनले ‘हाम्रो स्कूल पाठशाला’, ‘यस्तो पाराले चल्दै चल्दैन’ ‘लौ झिल्केले झक्यायो’, लगायत आधादर्जन बढी गीतहरु गाउँदा पनि फुर्सद पाएनन् । दर्शक दीर्घाबाट ‘वान्स मोर’ भन्दै माग भएपछि उनले आफ्ना बाँकी रहेका ट्रयाकहरुमा समेत गीत गाए ।
उनको गीतमा अधिकाँश दर्शकहरुले स्वर मिलाएर साथ दिएका देखिन्थे । नाच्नेहरुको भीडलाई समेत सुरक्षाकर्मीले थेग्न हम्मे हम्मे पर्ने अबस्था थियो । पोखरेलसँगै अर्का गायक अन्जन दाहालले ‘नखोज एक मान्छे, जमात छ हेटौँडामा’ बोलका गीत गाएका थिए । त्यसैगरी गायिका मञ्जु गौतमको प्रस्तुतिले पनि उत्तिकै स्याबासी पाएका थियो ।
कार्यक्रममा गायकहरु राजु बिरही, स्थानीय गायक गमबहादुर चेपाङले मौलिक गीतसंगीत प्रस्तुत गरेका थिए भने आरजे क्र्युका तर्फबाट नृत्यहरु प्रस्तुत भएको थियो । त्यसैगरी युनिभर्सल लर्निङ एकेडेमी मनहरीले पनि आफ्ना दुईवटा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने चितवनका बिशाल चेपाङसहितको टोलीले नृत्य प्रस्तुत गरेको थियो ।
समग्रमा नवौ दिनको सांगीतिक कार्यक्रम अत्यन्तै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको कलाकार सांस्कृतिक व्यवस्थपन उपसमिति संयोजक विष्णुराम कालाखेतीले बताए । आयोजक मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ पश्चिम क्षेत्र समितिका अनुसार हालसम्म महोत्सवमा ४ करोडभन्दा बढीको कारोबार भइसकेको छ । महोत्सवमा अटो, कृषि, बाल उद्यान, तयारी पोशाक, खानेकुरा तथा अन्य दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुका २ सय वटा स्टल छन् ।
मंगलबार गायक शिव परियार आउने कार्यक्रम छ । उनलाई मध्य नेपालमै चर्चित सरिखेतस्थित भ¥याङकाली पञ्चेबाजा समूहले बाजा बजाएर महोत्सव स्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम तय भएको सांस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति संयोजक कालाखेतीले जानकारी दिए । माघ १४ गतदेखि सुरु हुने भनिएपछि हावाहुरीले असर पारेपछि माघ १६ गते मात्रै महोत्सव सुरु भएको हो । २ दिन ढिला गरी सुरु भएको महोत्सवको अबधि थप दुई दिन थपी माघ २६ गतेसम्म पु¥याइएको छ ।
हेर्नुहोस् सन् २०१७ का टपटेन बलिउड हिरोइन
दमदार दामन (हेर्नुहोस् फोटो फिचर)
कमल थापाले आफ्नो पार्टीका कोषाध्यक्षकी छोरीलाई चलचित्र बिकास बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरे
बामगठबन्धनलाई भाेट माग्दै बद्रि र प्रिया
दामनमा वृहत्त साँस्कृतिक कार्यक्रम र चिठ्ठा प्रतियोगिता, कस्लाई पर्यो स्कूटी उपहार ?
हरिबोधनी एकादशीमा दामनमा बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम
सापकोटाको सपना साकार
क्या राम्रो चित्लाङ जाने रोड, संगसंगै घुम्न जाऊँ ए सानु पालुङ शिखरकोट [हेर्नुहोस् भिडियो ]
थाहा कला केन्द्रका प्रशिक्षार्थीलाई मुक्तानले दिए छात्रवृत्ति
पहिलो सस्करणको मिस्टर एण्ड मिस रोट्याक्टको आवेदन खुल्यो, अनलाईन मार्फत आवेदन दिन सकिने
सुगम पोखरेल साँझ तथा सम्मान कार्यक्रम
बज्रवाराहीमा दशै विशेष बृहत साँस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने
भीमफेदीमा भव्यताकोसाथ मनाइयो ल्होसार
ऐतीहासिक भीमफेदीमा तामाङ्ग समुदायको पहलमा सोनाम ल्होसार ‘नगी ल्हो’ २८५४ कुकुर बर्ष भब्य रुपमा मनाएको छ । कार्यक्रम संयोजक सोम बहादुर घलानका...
बज्रवाराहीमा अत्याधुनिक कृषि प्रणाली सम्बन्धी तालीम
थाहा नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा अत्याधुनिक प्रविधि सहित व्यवशायिक कृषि प्रणाली सम्बन्धी एक दिने तालीम सम्पन्न भएको छ । बज्रवाराही नमुना व्यवशायिक टनेल...
फेरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो (हेर्नुहोस मूल्यसूची)
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूलय फेरि बढाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको भन्दै बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा मूल्यवृद्धि...
तीन नम्बर प्रदेश राजधानी हेटौंडा, प्रमुखमा कोइराला (हेनुहोस् सूची सहित)
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातवटा प्रदेशका प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेको छ। ३ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामेल कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर...
कर तिर्न किन अटेर गर्छ, दामनको पानोरोमा रिसोर्ट ?
पर्यटकीय क्षेत्र थाहानगरका अधिकांश ठूला होटलहरुले हालसम्म कर नै नतिरेको थाहा नगरपालिकाले बताएको छ । नगरपालिका भित्र सञ्चालित अधिकांश होटलहरुले...